Japàna: Ho Averina Hatsangana Indray ny Teatra Kabuki · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2017 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, Español, polski, English
Iray amin'ireo tranobe mora fantatra indrindra ao Japàna, ny Kabuki-za lehibe sy tranainy ao Ginza izay nakatona ny volana Aprily 2010. Horavàna izy io ary ho lasa teatra sy toerana ahitàna birao maro samihafa misy fifandraisana mivantana amin'ny toerana fandraisana fiarandalamby ambanin'ny tany. Aza adino ny manapotsitra ity rohy ity hahitànao ireo endrikendrika nomanina ho an'ny ivelany. Ity ny sary fahatelo ao amin'ilay pejy, tsy afaka ny handingana an'io ianao.
Tany amin'ny 2005 tany ho any ny Shochiku Company, Limited, tompon'ny tany sady mpitantana ny teatra no nanomboka niresaka famerenana manorina azy io. Ny antony voalohany narosony dia tsy dia ampy fepetram-piarovana sahaza loatra ilay tranobe mba hanoherany ny loza voajanahary, indrindra fa ny horohorontany.
Nikarakara andianà “fampisehoana fanaovana veloma” ny Shochiku. Nilahatra hijery ny iray tamin'ireny i Yoko Ishikura ary manamarika hoe:
Misy famantaranora manao dia miverina napetaka eo anoloan'ilay teatra, toerana nakàn'ny olona maro sary. Hoy i Yuzu :
Ilay bilaogera, gohermes dia mahatsiahy ny “Executive Centre Tokyo Bankers Club Building” (東京銀行協会ビル) tao amin'ny faritr'i Marunouchi. Indrisy fa nahazo anaram-bosotra hoe “taotrano hatina” io tranobe io (かさぶた建築) ary manontany tena i Kyo :
Averina indray, ity ny rohy misy ilay Kabuki-za vaovao.